Seamless Backless Deep U Thin Cup Low Back Lace Women's Bra - Free Shipping & No Tax | ၀ ယ်သည် WoopShop®
Seamless Backless Deep U Thin Cup Low Back Lace အမျိုးသမီး Bra
အရောင် A-Black အဖြူရောင် A-Skin ပါ C-Black B-White B-Skin ပါ B-Black C- အဖြူရောင် C-Skin ပါ
ခညျြအနှော Size ကို L 2XL XL M S 3XL
A-Black / L / တရုတ် A-White / 2XL / တရုတ် A-White / XL / တရုတ် A-White / L / တရုတ် A-White / ကျား / မတရုတ် A-White / S / တရုတ် A-Skin / 2XL / တရုတ် A-Skin / XL / တရုတ် A-Skin / L / တရုတ် A-Skin / ကျား / မတရုတ် A-Skin / S / တရုတ် A-Black / 2XL / တရုတ် A-Black / XL / တရုတ် C-Black / S / တရုတ် B-White / 2XL / တရုတ် B-White / XL / တရုတ် B-White / L / တရုတ် B-White / M / တရုတ် B-White / S / တရုတ် B-Skin / 2XL / တရုတ် B-Skin / XL / တရုတ် B-Skin / L / တရုတ် B-Skin / ကျား / မတရုတ် B-Skin / S / တရုတ် B-Black / 2XL / တရုတ် B-Black / XL / တရုတ် B-Black / L / တရုတ် B-Black / ကျား / မတရုတ် B-Black / S / တရုတ် C-White / 2XL / တရုတ် C-White / XL / တရုတ် A-Black / S / China C-White / L / တရုတ် A-Black / M / တရုတ် C-White / ကျား / မတရုတ် C-White / S / တရုတ် C-Skin / 2XL / တရုတ် C-Skin / XL / တရုတ် C-Skin / L / တရုတ် C-Skin / ကျား / မတရုတ် C-Skin / S / တရုတ် C-Black / 2XL / တရုတ် C-Black / XL / တရုတ် C-Black / L / တရုတ် C-Black / M / တရုတ် B-Skin / 3XL / တရုတ် B-White / 3XL / တရုတ် C-Black / 3XL / တရုတ် C-Skin / 3XL / တရုတ် A-Black / 3XL / တရုတ် A-Skin / 3XL / တရုတ် A-White / 3XL / တရုတ် B-Black / 3XL / တရုတ် C-White / 3XL / တရုတ်
Seamless Backless Deep U Thin Cup Low Back Lace အမျိုးသမီးဘရာစီယာ - A -Black / L / China backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ဘရာစီယာပုံစံ: Seamless, One-Piece
ကြိုးအမျိုးအစား: ပြောင်းနိုင်သောကြိုး၊ Halter၊ Adjusted-straps
ဖလား Shape: လေးပုံသုံးပုံ (3 /4ဖလား)
မှတ်ချက်။ A နှင့် C မော်ဒယ်များ၏ပခုံးသိုင်းကြိုးများသည်ချိန်ညှိနိုင်ပြီးဖြုတ်တပ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုဝတ်ရန်နည်းလမ်း ၃ ခုရှိသည်။ B ပုံစံပခုံးသိုင်းကြိုးသည်ချိန်ညှိနိုင်သော်လည်းဖြုတ်တပ်။ မရပါ။ ၎င်းကို ၀ တ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုသာရှိသည်။
အရွယ်အစားပြသနာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်သစ် ၀ ယ်သူများသည်နိုင်ငံတကာဘရာစီယာအရွယ်အစား (သို့) ဥရောပဘရာစီယာအရွယ်အစားကိုသုံးလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ အရွယ်အစားဇယား၏ပထမကော်လံအတိုင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ သင်ပြင်သစ်အရွယ်အစားကိုသုံးနေပါကဒုတိယကော်လံအတိုင်းရွေးချယ်ပါ။ ပြင်သစ်အရွယ်အစားများ၏အမည်များနှင့်အရွယ်အစားများသည်ဥရောပ (သို့) နိုင်ငံတကာအရွယ်အစားများနှင့်ကွဲပြားသည်။ နိုင်ငံတကာစံ 70A = ဥရောပစံ 32A = ပြင်သစ်စံ 85A အခြားနိုင်ငံများမှဖောက်သည်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ပထမကော်လံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အရွယ်အစားကိုလိုက်နာပါ။
97 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
ဘရာစီယာကောင်းကောင်းတစ်ထည်၊ ဒါပေမယ့်ထိတွေ့မှုကအရမ်းသာယာတယ်၊ paralon အတွင်းပိုင်းကိုဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့တြိဂံပုံစံနဲ့ထည့်ထားတယ်။ ထောက်ပံ့မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ရင်ဘတ်သေးသေးလေးပေါ်မှာကောင်းတယ်။ အနံ့မရှိ။ နှစ်ပတ်အတွင်းရောက်လာတယ်။
၇၅ E သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပံ့ပိုးမှုအားနည်းသော်လည်း၎င်းသည်ဖွင့်ထားသောကျောပိုးအိတ်အောက်မှထွက်လာစဉ်
еньприятныйбюстгальтер! ၇၅ Вабрериал отличноподошло! Отправилибыстро, дошлоза 75 недели။ отографиисоответствуютреальномутовару!
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ bra omg အရည်အသွေးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီးသက်တောင့်သက်သာဝတ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေသည်။